China Electric mop mop ifektri abakhiqizi | Ukuncibilikisa
Isikhathi sokusebenza > 60min (Ukuqothula Okomile); > 40m (Ukumanzi okumanzi)
Amandla webhethri 3200mAh Lithium ibhethri
Isikhathi sokushaja 2.5 Amahora
Isisindo sengqikithi 2.7KG
Umthamo Wethangi Lamanzi 300ml
Usayizi womkhiqizo 124 * 34 * 20cm
Izinga lomsindo I-30-50 dBA
1. 4-in 1 Amatebhe amaningi
I-mop, i-polisher, i-waxer, i-scrubber yokumanzi neyomile, nokuhlanza
Uthole i-waxer polish / wax yeplathi yakho yobungcweti ukuze ibe yintsha sha noma nini lapho ufuna khona.
2. Kulula ukuhlanza izinhlobo ezahlukahlukene zezizathu nezimo ezahlukahlukene
Bhekana nezinhlobo eziphansi eziningi ezinjengephansi lamapulangwe, i-ceramic, imabula, indawo yezitini, ama-laminates, njll.
okumanzi / okomile / okupholisha ukukhuhla, idivayisi eyodwa enemisebenzi yokuhlanza eyi-4: uthuli, ibala lamafutha, ibala lobisi, imfucumfucu enodaka.
3. Ukucindezela okukodwa
Ukomisa okusheshayo ngaphandle kwebala lamanzi, kuyomisa phansi ngokushesha futhi kungashiyi mabala amanzi. Ngenxa yamaphakethe ajikelezayo okusheshayo. Ukusebenza kwesandla esisodwa, akukho ukugoba, isikhathi nokonga amandla.
4. Umsindo ophansi
Umsindo ophansi ufinyelela ku-30-50 dB kuphela, cishe awukho umsindo wokusebenza futhi ungaphazamisi umndeni wakho ukuze uphumule kahle.
5. Ukushaja okuphathekayo nokusebenza isikhathi eside
Amandla angahlala imizuzu engama-60. Iyakwazi ukuhlanza nokugeza ezindaweni ezahlukahlukene, ihlangabezane nezidingo ezingama-200m2 ukuhlanza ngaphakathi. Ukusebenza kahle kwebhethri yokudonsa ibhethri engu-3200mmAh Lithium, Ihlanza ama-200sqm ngeminithi engama-60 ngecala elilodwa. Iphakethe lebhethri elitholakali, elilula ukushintsha nokushaja.
6. Amapayipi wokuphotha okubili anezinjini ezinamandla
Siza ukuhambisa imfucumfucu yakho ngokujulile, umzimba omkhulu osindayo ngamaphakethe wokuphotha okusheshayo isisindo se-Net ngu-2.7KG oqinisekisa ikhono lokuhlanza elanele
7. Ukukhanya kwe-LED
Ikusiza ukuthi uthole izindawo ezinzima ukufinyelela kalula kuzo: usofa, amadeski, amatafula, imibhede
8. Hlanza izindawo njengoba ufisa
Amakhona emopu nezindawo ezingaphansi ngendlela entofontofo, evundlile engu-180°, mpo 90°.
Langaphambilini Ubucwebe be-Ultrasonic Acashile
Olandelayo: Ukuhlanza phansi okungenantambo
I-Cordless Electric Spin Mop
I-Mop Spin kagesi
I-Mop kagesi engenantambo
I-Mop engugesi kagesi engenantambo